Lalam-pirenena faharoa: voasambotra ireo jiolahy mpandroba kaontenera | NewsMada
Lalam-pirenena faharoa: voasambotra ireo jiolahy mpandroba kaontenera
Tratra am-bodiomby, araka ny fitenenana. Noraisim-potsiny, teo anelanelan’i Fanandrana sy Ambodibonara (lalam-pirenena faharoa), ny jiolahy iray mpandroba kamiao mpitondra kaontenera. Herinandro mialoha izao, efa voasambotry ny zandary ny namany telo hafa.
Saron’ny zandary tamin’ iny lalam-pirenena faharoa iny, teo am-pihanihana kamiao mitondra kaontenera, ny tovolahy iray, efa nivonona hamaky kaontenera ka fiara taksibrosy manana ny laharan-taribin’ny zandary no niantso vonjy. Nanenjika ilay kamiao ny zandary ka noraisim-potsiny teo ambonin’ny kaontenera ilay jiolahy ity. Voalaza fa efa nisy telo lahy hafa voasambotra talohan’izao. Ity fihanihana fiara ity, izay efa matetika loatra raha ny any amin’ny lalam-pirenena faharoa. Maro ny efa lasibatra tamin’izany ary nampitaraina ny mpitatitra. Manao andiany mihitsy ireo jiolahy.
Tsy nijanona teo ny hetsika fa nitohy tamin’ny fanaraha-maso ny tsy fandriampahalemana mampitaraina ny fokonolona ao amin’ny Cité Canada Toamasina. Nisy rahateo ny antso nataon’ny fokonolona ary tonga ara-potoana ny zandary ka voasambotra ny roa lahy naman’ny telo lahy efa voasambotra ny herinandro lasa teo.
“Tsara ny vokatra”, hoy ny mponin’ i Toamasina, saingy zanatrondro fotsiny ireny fa tsy ny
trondro vaventy izay tena jiolahy sahy mamono olona sy manao fanafihana mitam-piadiana, tena fototry tsy fandriamphalemana sy mampihorohoro fiarahamonina mbola afaka manao ny asany hatreto ary tsy mety voasambotra.
Mampimenomenona ny olona tanteraka ny tsy fandriampahalemana, ary anisany ny ao Toamasina. Anisan’ny mafana amin’ny asan-jiolahy ny any an-toerana. Any ny ahitana fanafihana mitam-piadiana matetika, fakana an-keriny mahery vaika. Efa nisy ihany ny tratra tamin’ireo, saingy voalaza fa mbola maro tena raindahiny tsy tratra. Anisan’ny nanaovan’ny zandary safidy ampiharana ny hetsika “Fandio” any an-toerana. Nisy ireo vokatra ireo fa miandry zavatra goavana ny rehetra, toy ny resaka fiparitahan’ny basy, sns.
Sajosy Yves S.